Isibonelelo sokuXhotyiswa kwe-IWCA-uMbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi
Qho ngo-Epreli 15.
Umbutho wamaZiko aBhalayo weHlabathi (IWCA) usebenza ukomeleza indawo yeziko lokubhala kuyo yonke imisebenzi yayo. Umbutho ubonelela ngeGranti yoPhando ngeDissertation yoPhando ukuxhasa abafundi abagqirha njengoko besebenza ekubhaleni dissertation enxulumene neziko. Isibonelelo senzelwe ukuxhasa ngemali iindleko ezenziweyo ngamalungu abafundi obugqirha asebenzela ukugqitywa kwesidanga kunye nesidanga sobugqirha. Imali ingasetyenziselwa iindleko zokuphila; ubonelelo, izixhobo kunye nesoftware; ukuhamba kwiindawo zophando, ukubonisa uphando, okanye ukuya kwiinkomfa okanye amaziko afanelekileyo kulo msebenzi; kunye nezinye iinjongo ezingagutyungelwanga apha kodwa ukuxhasa umfundi ophumelele isidanga. Abafundi abagqirha abanomdla ovunyiweyo kwaye bakulo naliphi na inqanaba lophando / lokubhala ngaphaya kwethemba lokukhuthazwa bayakhuthazwa ukuba bafake izicelo.
Abamkeli besibonelelo bazakufumana itsheki ye-5000 yeedola kwi-IWCA xa kukhethwe umntu ophumeleleyo.
Isicelo kufuneka singeniswe ngumhla obekiweyo wokugqibela IPortal yobulungu be-IWCA. Gcwalisa iipakethi zesicelo ziya kuba nezi zinto zilandelayo kwifayile enye ye-pdf:
Ileta yokufaka ibhekiswe kusihlalo weegranti okhoyo othengisa ikomiti ngezibonelelo eziya kuthathwa kwinkxaso-mali. Ngokukodwa, ileta kufuneka yenze oku kulandelayo:
Chaza izicwangciso zokugqitywa kweprojekthi
Iileta ezimbini ekubhekiswa kuzo: Inye ivela kumlawuli wedisney kwaye enye ivela kwilungu lesibini lekomiti yedisney.
Phambili kwi-IWCA, phantsi kosihlalo weSihlalo seKomiti yezibonelelo, iikopi zopapasho okanye intetho
Fayila ingxelo yenkqubela phambili kwi-IWCA, phantsi kosihlalo weSihlalo seKomiti yezibonelelo, ngenxa yeenyanga ezilishumi elinambini zokufumana iimali zesibonelelo.
Ukugqitywa kweprojekthi, ngenisa ingxelo yokugqibela yeprojekthi kunye nePDF yenkcazo egqityiweyo kwiBhodi ye-IWCA, phantsi koSihlalo weKomiti yezibonelelo
Khawuqwalasele ngamandla ukungenisa umbhalo-ngqangi osekwe kuphando oluxhaswayo kwenye yeempapasho ezinxulumene ne-IWCA: Ijenali yeZiko lokuBhala, okanye Ukujongwa kwakhona koontanga. Zimisele ukusebenza nabahleli (aba) kunye nabavavanyi (m) ukuhlaziya imibhalo ebhaliweyo ukuze ipapashwe
2021: Yuka Matsutani, "UkuLawula iGap phakathi kweTheory kunye nokuSebenza: iNgxoxo yokuHlalutya iSifundo seziKhokelo zokuSebenzisana kunye neZiqhelaniso zokuFundisa kwiZiko lokuBhala leYunivesithi"
2020: Jing zhang, "Ukuthetha ngokubhala eTshayina: Amaziko okubhala azinceda njani iimfuno zabafundi baseTshayina?"
2019: ULisa Bell, "AbaQeqeshi boQeqesho kwi-Scaffold kunye nababhali be-L2: Iprojekthi yeZiko lokuBhala uPhando"
2018: ULara Hauer, "Iindlela eziTshintshayo zokuFundisa ababhali beLwimi eziNinzi kumaZiko okuBhala eKholejini" noJU-essica Newman, "Isithuba esiphakathi: ukumamela ngokwahlukileyo kuluntu nakwiiseshoni zeZiko lokuBhala leYunivesithi"
2017: UKatrina Bell, "Umhlohli, uTitshala, uMfundi, uMlawuli: Iingcinga zaBacebisi baNgoku kunye nabaFundi beziDanga"